Ndezvipi zvakanak zvekushandisa zvakasiyana zvigadzirwa zvekukura kukuru
Kuti usangane nehunyanzvi zvinodiwa zvevatengi vayo panguva yekushanda kwemahombekombe mashini, iyo yekushandira inofanirwa kuve yakanyatsoiswa panzvimbo yakatarwa pane chishandiso chishandiso panguva yekushandiswa. Kuti udzivise iyo yekushandira panguva yekugadzira michina. Kana iko kusuduruka kuri affec ...
Ndeapi matanho ehunyanzvi eakanangana nemishini yekugadzirisa zvikamu
Pamberi pekugadziriswa kwemhando dzezvikamu zve auto, zvinodikanwa kuti unyatsonzwisisa ruzivo rwakakodzera rweShenzhen chaiyo machining. Zvino, ndeapi matanho ehunyanzvi ekurwisa nemazvo? 1.Isa nyore kugadziriswa uye kugadziriswa kwemuchina, chengetedza basa, mechiki yekucheka uye proce ...
Zvinhu zvine gumi zvinokanganisa mashandisirwo ekugadzirisa zvikamu zvakakwana
Sezvo isu tese tichiziva, chikonzero nei iko kwekugadziriswa kwezvakanaka zvikamu kunoda kunzi machining kuri chaizvo nekuti maitiro ekugadzirisa uye maitiro edhishu akakwirira kwazvo, uye kunyatso kudiwa kwechigadzirwa kwakanyanya kwazvo, uye iko kugadzirisa kwekugadzirisa kwezvakanaka zvikamu zvinosanganisira. ..
Kugadziriswa kwemuchina kwakajairika uye kwese-kunosanganisira maitiro echikamu. Iyo yekugadzirisa michina inotaurwa pano inoreva chaizvo nzira dzekugadzirisa dzinoshandiswa mune yekurapa maitiro kurapwa. Iko kune chikamu chinopindirana neyekugadziriswa kwemuchina mu "Kugadzira P ...
Iyo jira simbi yekugadziriswa kwemidziyo goko rinonyanya kureva kuenderera mberi kwekugadziriswa kwemauto-gobvu mahwendefa, uye inogona kutamba basa rakanaka kwazvo mune ino maitiro. Nekuti zvikamu zvaro zvakagadziriswa zvine hunyanzvi, saka mundima yese Izvo zvakakwezva vanhu vazhinji kutarisisa ...
Maitiro ekugadzira iyo jira simbi kugadzirisa kwemidziyo goko zvirinani uye ndeapi ruzivo anofanirwa kutariswa kutarisisa
Kune akawanda maitiro eiyo sheet simbi yekugadziriswa kweiyo midziyo goko. Mukuita kwekuzviita, iwe unofanirwa kunyatsoteerera kune zvese zveese mativi, kuti igone kutamba iri nani basa. Vanhu vazhinji vari kufunga nezve aya chaiwo mamiriro. Pamwe ini handizive zvakawanda nezve iyo sp ...
Kugadzirisa hunhu hweCCC maturusi maturusi
1. Inochinjika Kana uchigadzirisa nyowani workpiece pane CNC chishandiso chishandiso, iko kugadziriswa kweiyo nyowani workpiece kunogona kungoonekwa chete nekugadzirisazve chirongwa chekugadzirisa cheiyo nyowani workpiece. Kana muchina wekugadzira paCCC muchina maturusi, zvinongova nyore zvigadziriso zvinodiwa, uye hapana chikonzero chekugadzira ...